Chọta ohere akpaaka azụmaahịa | Martech Zone
Monday, March 21, 2011 Wednesday, October 16, 2013 Douglas Karr
Anyị na-agbasi mbọ ike iji rụọ ọrụ ndị ahịa anyị. Ka ị na-amalite iche banyere mbọ ndị na-agba ahịa gị, olee ebe ị na-etinyekarị oge? Ndị ụlọ ọrụ na-ebelata ego ma ọ bụ na-elelị oge ọ na-ewe iji laa n'etiti usoro. Anyị dị nnọọ gwa banyere oge ọ na-ewe iji dekọọ ndu na imetụ aka na CRM - na ngwaahịa na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe.
Ohere bụ na ị na-eme nke a ogologo ụbọchị niile site na mbọ ị na-agba n’ahịa, mana ị naghị amata ya. Ọbụna ihe dị mfe dị ka izipu ndị na-eso ụzọ gị Tweet nwere ike ịdị ka ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù… mana ọ bụrụ na ịchọrọ itinye njikọ ma soro na Tweet laghachi na mmemme gị nchịkọta, ọ nwere ike ịchọ ka ị tinye akara ma ọ bụ ihe nchọpụta mkpọsa, belata site na ndị ọzọ. URL shortener, nwalee shortened njikọ… wee biputere tweet.
Nke a mere ka ọ bụrụ obere mgbalị. Ọ bụrụ na ị na-emeghachi ihe a oge ụfọdụ, ị ga-eri oge bara uru. Wepụta oge wee nwalee nke a n’onwe gị. Oge ọzọ ị na-ede ọdịnaya, gbanwee data, ma ọ bụ nyochaa nsonaazụ… akara ala oge ụfọdụ ka ị na-eme usoro ahụ. Ga-ahụ na ime ezigbo ọrụ na-ewe ihe pere mpe karịa ntụgharị dị n'etiti.
Mgbanwe ndị ahụ bụ ọla edo ma nye ohere itinye ego na ngwa ngwa akpaaka ahịa. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ahịa akpaaka na-enye gị ohere ime obere ihe na obere ihe. Na otutu oge, ahia akpaaka nwere ike belata nsogbu nke njehie mmadu! Dị ka ndị ukwu Ron Popeil kwuru, sị, “Tọọ ya ma chefuo ya!”
Dịka ọ masịrị m ịsị, “O nwere ike ịbụ ngwa maka nke ahụ!”
Tags: jquery akwụkwọ mpịakọtavideo vidioweta
Jesubi: Ọgbọ Dị Mfe Dị Mfe